Khadka Holland America wuxuu bilaabaa xilli uu la socdo Cruise to the Caribbean
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Khadka Holland America wuxuu bilaabaa xilli uu la socdo Cruise to the Caribbean
Holland America Line's cusub ee Rotterdam waxa uu baxayaa maanta, Noofambar 5, saacada 5 pm EST oo ka timi Fort Lauderdale, Florida, safarkeeda ugu horeeya ee Caribbean-ka - safar wareeg ah oo shan maalmood ah oo booqanaya Bimini, Bahamas, oo ku qaatay laba maalmood Half Moon Cay. Markabku wuxuu yimid Port Everglades Noofambar 3 ka dib safarkiisii ​​ugu horreeyay ee bad-mareenka ah ee ka soo shiraacday Amsterdam, Netherlands, Oct. 20.
Rotterdam waxay calaamad u tahay markabkii labaad ee ku noqda safarka Florida iyo Kariibiyaanka ee Holland America Line tan iyo joogsiga warshadaha oo dhan wuxuu bilaabmay 20 bilood ka hor. Inta lagu jiro bisha Nofembar, markabka waxaa ku biiri doona Port Everglades oo ay weheliyaan Pinnacle Class walaasheed Nieuw Statendam iyo Eurodam, kuwaas oo sidoo kale bilaabay xilli ciyaareedkooda Caribbean. Nieuw Amsterdam waxa ay safarkii Caribbean ka bilowday Fort Lauderdale Oct. 23.
Khadka dalxiisku waxa uu u dabaal degay tegitaanka Rotterdam ee Kariibiyaanka si uu u soo dhaweeyo martida diyaaradda, Antorchana waxa uu ku sugnaa gacanta si uu u salaamo rakaabkii soo raacayay.
Ka dib safarkii Noofambar 5, Rotterdam wuxuu ku dhoofi doonaa Kariibiyaanka illaa Abriil, iyadoo dhammaan safarradu ay ka baxayaan Fort Lauderdale. Socdaalku waxay u dhexeeyaan lix ilaa 11 maalmood waxayna ku yaalaan gobolka koonfurta, bari, galbeedka iyo safarrada kulaylaha. Martida raadinaysa bixitaan dheer waxay gali karaan Safarrada Ururiyayaashu - safarro dib-u-socod ah oo la isku daray oo bixiya sahamin qotodheer oo daboolaya in ka badan hal aag.
Socdaal kasta oo Kariibiyaanka ah waxaa ka mid ah wicitaanka Half Moon Cay, oo lagu qiimeeyay lambarka-koowaad ee wicitaanka ee Kariibiyaanka ee martida khadka. Meesha quduuska ah ee quruxda badani waxay u rogtay garoon loogu talagalay dalxiisayaasha waxayna ka kooban tahay xeebaha ugu cadcad ee ugu fiican, guriyaal laba dabaq ah iyo cabanas gaar ah, goobaha wax lagu cuno sida Lobster Shack, barxadda biyaha ee carruurta iyo dalxiisyo xiiso leh oo kala duwan oo loogu talagalay dadka dabeecadda jecel, socdaalayaasha xiisaha leh. iyo sahamiyeyaal.